Online Burma Library > Main Library > Health > Health Promotion, Education, Research and Training > "Nightingale Journal" နိုက်တင်ဂေးလ် ဂျာနယ်
> Health Promotion, Education, Research and Training
> "Nightingale Journal" နိုက်တင်ဂေးလ် ဂျာနယ်
"Nightingale Journal" နိုက်တင်ဂေးလ် ဂျာနယ်
Published in Burmese by the Mao Tao Clinic, Mae Sot, Thailand, "The Nightingale Journal provides information on health, education and other important issues relating to the displaced Burmese population living on the border."
Title: "Nightingale" Health Journal (Index) နိုက်တင်ဂေးလ် ဂျာနယ်
Description/subject: Issues online from December 2005
Source/publisher: Maetao Clinic via BMA
Alternate URLs: http://www.bmahealth.org/program-activities/report-and-publication/nightingale-helath-journal/
Date of entry/update: 15 December 2013
Title: "Nightingale Journal" Index2နိုက်တင်ဂေးလ် ဂျာနယ်
Description/subject: Issues online from December 2005 (၂၀၀၅) ဒီဇင်ဘာမှ (၂၀၁၀) သြဂုတ် အထိ ထုတ်ဝေခဲ့သော နိုက်တင်ဂေးလ် ဂျာနယ်များ
Source/publisher: Mae Tao Clinic မယ်တော် ဆေးခန်း
Title: "Nightingale Journal", December 2012
Source/publisher: Mao Tao Clinic မယ်တော်ဆေးခန်း
Date of entry/update: 25 January 2013
Title: "Nightingale Journal", August 2012/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- သြဂုတ်၊ ၂၀၁၂
Title: "Nightingale Journal", January 2012/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၁၂
Description/subject: အူအတက်ရောင်ရမ်း သေလမ်းနီးတဲ့ ရောဂါ... ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် (၅၂)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲ ပုံရိပ်များ (၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁)... ကချင်ဒုက္ခသည် အရေး ၀ိုင်းဝန်းကူညီစောင့်ရှောက်ပေး... မဲဆောက်မြို့၌ ကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီ အက်စ်နေ့ အခမ်းအနား (၁-၁၂-၂ဝ၁၁)... မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်များအသင်းမှ ကြီးမှူးသည့် မိုင်းအန္တရာယ်ပညာပေးနှင့် ရှေးဦးသူနာပြုသင်တန်းဆင်းပွဲ (၂၃-၁၁-၂ဝ၁၁)... ကျန်းမာရေးရာ ပြဿနာအဖြေရှာ... လျှော့မယ်လေ .. လျှော့မယ်... ၀က်သက်ရောဂါနှင့် ဆက်စပ် ဗီတာမင်များ... ကျားကြောက်လို့ ရှင်ကြီးကိုး ရှင်ကြီး ကျားထက်ဆိုး (သို့မဟုတ်) ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ကျန်းမာရေး... ကျောင်းကျန်းမာရေး၊ ဗီတာမင်အေးနှင့် သံချဆေး... နိုက်တင်ဂေးလ် ကျန်းမာရေး ဂျာနယ် ထုတ်ဝေခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်... ကျန်း မာရေးကောင်း အောင် အိပ်တတ်ကြဖို့... ဂုဏ်ယူဝမ်းသာ ချင်တဲ့ သတင်း... အဲယား ချမ်းစင်... လူအများ သတိ မပြုမိသော စိတ်ကျန်းမာရေး... သက်ကြီး ရွယ်အိုတို့ မှတ်ဥာဏ် မချို့စေဖို့... ကလေး တွေ အတွက် ပါရာစီတမော... ဆေးတင်း အတိုအထွာ(အိဒ်စ် ရောဂါ ကုသရေး မျှော်လင့်ချက်သစ်... ဆေးမတိုးတဲ့ ကာလသားရောဂါ... အရက်ကို အသိရှိရှိသောက်ဖို့...လက်တော့ ကွန်ပြူတာသမားတွေ သတိထား)... ဒါဖတ်ပြီးမှ ဖုန်းပြောပါ... ဒါဖတ်ပြီးမှ ကော်ဖီသောက်ပါ... ဒါဖတ်ပြီးမှ ဆံပင်ဖြောင့်ပါ... ဆားပေါ့ပေါ့ စားတိုင်းကောင်းတာ မဟုတ်... တစ္ဆေလက်ကို အယားဖျောက်ဖို့
Format/size: pdf (956K)
Title: "Nightingale Journal", November 2011/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၁
Description/subject: ရေကာတာကြီးများ၊ လူထုကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာများ... နယ်လှည့်ကျောပိုးအိတ် ကျန်းမာရေး လုပ်သားအဖွဲ့ အကြောင်း တစေ့တစောင်း... ရေကာတာ တည်ဆောက်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်... ကျန်းမာရေးရာ ပြဿနာ အဖြေရှာ... နိုက်တင်ဂေးလ် ကျန်းမာရေးဂျာနယ် ထုတ်ဝေခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်... ကင်ဆာနိုင်ဆေးဖက်ဝင် သင်္ဘောပင်... ဒီလိုနေမှ၊ ဒီလို စားပါမှ ဂလိုကျန်းမာမယ်... လိပ်ခေါင်းရောဂါ... ဆရာဝန်နှင့် သူ၏ မျက်နှာဖုံးတပ်လူနာများ... သဘာဝကောက်ပဲ သီးနှံအစေ့အဆံ သစ်သီး သစ်ဥများစားသုံးခြင်းဖြင့်... ထူးထူးခြားခြားနှင့် ရိုးရိုးသားသား... သားအိမ်ခြစ်ခြင်းနှင့် သန္ဓေတားဆေးအသုံးပြုခြင်း... အရက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး... ငှက်ဖျားကာကွယ်ဆေးမျှော်လင့်ချက်... ကင်ဆာဆေး သတင်းကောင်း... ရဲရဲသာရင်ဆိုင်ပါ၊ ရှောင်ပြေးရင် သေဖို့များတယ်... အမျိုးသား လိင်တူချင်သူကင်ဆာပိုဖြစ်... အကောင်းဆုံး ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း... ဒါဖတ်ပြီးမှ ဂျင်းဘောင်းဘီဝယ်ပါ... သွားကိုက်ရောဂါ မပေါ့ပါနဲ့... နိုက်တင်ဂေးလ် ကာတွန်း... ရယ်မောခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ဆေး...
Format/size: pdf (1.61MB)
Title: "Nightingale Journal", September 2011/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၁
Description/subject: လှစေ ၀စေ သေစေ မရှိမဖြစ်တဲ့ အဆီဓါတ်... ကရင်နီ ဒုက္ခသည်စခန်း (၁)တွင် လူ ၅၀၀ ကျော် တုပ်ကွေးနှင့် မျက်စိနာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေ... ကျန်းမာဝဖြိုး အလှတိုးကြစေဖို့... ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာ အလုပ်သမားများ၏ ကလေးငယ်များ အရေပြားရောဂါ ကူးစက်ခံစားနေကြရ... ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး အာရှမှာ ပြန်ဖြစ်နိုင်... နိုက်တင်ဂေးလ် ကျန်းမာရေး ဂျာနယ် ထုတ်ဝေခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်... မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးပညာရှင်များ အသင်းမှ ကြီးမှူး စီစဉ်သည့် Medic Refresher Training ဖွင့်ပွဲ အခမ်း အနား (၁၅- ၈- ၂၀၁၁) ... ကျန်းမာရေး စနစ်ကောင်းရန် ကျပ်သန်း ၈၀၀၀ နှစ်စဉ်လိုအပ်နေဟု ဆို... လူထုကျန်းမာရေး အစီအစဉ် စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း ဆိုင်ရာ ဆရာဖြစ်သင်တန်း ဆင်းပွဲအခမ်းအနား (၂၈- ၇- ၂၀၁၁) ... ဟားခါးမြို့ တုပ်ကွေး အန္တရာယ် ထိပ်ဆုံးရောက်နေ... ကျန်းမာရေး ရာ ပြဿနာအဖြေရှာ... သွေးလွန် တုပ်ကွေးရောဂါတားဆီးရေး... မြွေအန္တရာယ် မကြုံရလေအောင်... ကိုယ်ခန္ဓာ အဆီလျော့ကျ ကန်းမာပေါ့ပါးဖို့... ဆရာဝန်နဲ့ နိုင်ငံရေး... ကျမသားလေး ဆာနေလို့ ငိုတဲ့ အချိန်... သီးနှံ ၉ မျိုးကိုစားပြီးကျန်းမာရေး သော့ ၁၂ ချောင်းကို ဖွင့်ကြစို့ ... ၁၅ မိနစ်ပဲကစား၊ အသက်ရှည်မယ်... ဆီးချိုရောဂါသတင်းကောင်း၊ သတင်းဆိုး... ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက် ကာကွယ်ရေး... ကိုယ်ခံအားကျရောဂါ ကုဆေးနဲ့ ကာကွယ်ရေး... ကုမ္ပဏီဆေး၊ ဓာတုဆေး... ညစ်ညမ်းစာပေ၊ ရုပ်ရှင်နဲ့ လူ့စိတ်... အပြာကားအကြည့်များရင် ပန်းသေမယ်... အိတ်ဆောင်ဓါတ်ခွဲခန်း... စက်ဘီး အစီးများရင် ယောက်ျား အားလျော့မယ်...
Format/size: pdf (900K)
Title: "Nightingale Journal", July 2011/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၁
Description/subject: အရေးကြီးတဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး... စစ်ဘေး စစ်ဒဏ်ကုစားရေး... ကျန်းမာရေးနှင့် အစားအသောက် ICRC အကူအညီပေးစေလို... ၀က်နားရွက်ပြာ ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိကျသေချာသည့် သတင်းထုတ်သင့် ... နိုက်တင်ဂေးလ် ကျန်းမာရေး ဂျာနယ် ထုတ်ဝေခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်... တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည်အရေး ဂျွန်မက်ကိန်း စိုးရိမ်... ကနေဒါမှာ စက်ဘီးနင်းကာ ရန်ပုံငွေရှာ... မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်များအသင်း မှ မျိုးဆက်ပွားနှင့် ကလေး ကျန်းမာရေး မွမ်းမံသင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ (၁၇- ၇- ၂၀၁၁)... ဆေးဝါး အကူအညီတောင်း သူ HIV ဝေဒါနာရှင်ပိုများလာ... ကျန်းမာရေး ဌာန နှင့် IOM ပူးပေါင်းပြီး ငှက်ဖျားဒေသမှာ ခြင်ထောင်ဝေငှ... အာသီးရောင်ခြင်း... ချစ်စိတ်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှ ဇီဝဓာတု ဖြစ်စဉ်များ... ညစဉ် (၇) နာရီပြည့်အောင် အိပ် ရမယ်နဲ့ မဟောက်ရအောင် ဘာတွေ ဆောင်ရမလဲ... လေသင်တုန်း ဖြတ်ခြင်း... တွေးရယ်- ရယ်တွေး... မြင့်မြတ်နှလုံးသား... မီးတောက်မှ သောက်သူ... အိမ်မှာ ကလေး မွေးမယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်... ငါပြောသလိုလုပ် ငါတော့ တမျိုးလုပ်မယ်... ပိုသေခြာစေဖို့ အိမ်မှာ သွေးတိုင်းစို့... ဟန်ဆောင်အပြုံးတွေ... နိုင်ငံတကာ ဆေးသတင်းအတိုအထွာ (သောက်သောသူ အသက်ရှည်၏... လက်ကိုင်ဖုန်းရဲ့ ဓါတ်ရောင်ခြည်... အချိုရည်ကြိုက်လူမိုက်... ဒေါသကြီးတဲ့ အဖေ... ထွားချင်ကြသူများ... ကလေးသူငယ်များ အတွက် ပုံမှန် ဇီဝနှုန်းထား ဇယားသစ်... သွေးသွင်းဖို့ အတွက် လူလုပ်သွေးအစစ်... ဥာဏ်ကောင်းဆေး)
Format/size: pdf (868K)
Title: "Nightingale Journal", March 2011/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- မတ်၊ ၂၀၁၁
Description/subject: မြန်မာနိုင်ငံ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ပါတ်ဝန်းကျင် ကျန်းမာရေး (ဒေါက်တာတင့်ဇော်) ... ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာ... လူထုကျန်းမာရေး လုပ်သား မွမ်းမံသင်တန်းဆင်းပွဲ... ကလေးမေွး လာပြီးရင်အာဟာရ မချိုတ့ဲစေဖို့ ... ဖန်ပြွန်သန္ဓေသား... ဗီတာမင် B1 ချို့တဲ့သောရောဂါ... GUASA ကုထုံး... ဂေး(သို့မဟုတ်) လိင်တူချစ်သူ... တဝေါ့ဝေါ့ခရီး... ဆရာဝန်နှစ်ဦးနှင့် တောပုန်းကြီး... မြင်းခွာရွက် ထောပတ်သီးနဲ့ နနွင်းကို ဒီလို နေ့စဉ်စားသုံးကြမလား... ကျန်း မာရေးနှင့်တရားထိုင်ခြင်း... အပ်စိုက်ကုနဲ့ရောဂါပိုး ... ဆေးပြားကို စိတ်ခွဲစားခြင်း ပြဿနာ... နာရင်နာတာကို မှတ်... အအေးမိရောဂါအတွက် ဇင့်... အားသွင်းမှန်... တီဘီကာကွယ်ဆေးသစ်... သားဖွားဆရာမများအရေး... သွေးတိုးကုထုံး... ၀က်တုပ်ကွေးကောင်းကျိုး...
Format/size: pdf (968K)
Date of entry/update: 01 January 2012
Title: "Nightingale Journal", December 2010/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၀
Description/subject: မွေးကင်းစကလေး အသားဝါရောဂါ... အဆင့်မီကျွမ်းကျင်သည့် လူထုကျန်းမာရေး လုပ်သားကောင်း HIV ဝေဒနာရှင်များကို အလှူရှင်များပိုမို အာရုံစိုက်လာ... မဲဆောက်မြို့ စီဒီစီကျောင်းတွင် ပြုလုပ်သည့် ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ အခမ်းအနား (၅-၁- ၂၀၁၁) ... ဆေးအတိအကျ မပေါ်သေးတဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး... အာရှဒေသ အစိုးရများ၏ လူထုကျန်း မာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပေါ်ပြောင်းလဲလာသော သဘော ထားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အစိုးရ၏ ... နိုင်တင်ဂေးလ် ကျန်းမာရေးဂျာနယ် ထုတ်ဝေခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်... ဖန်ပြွန်သန္ဓေသား... နှစ်သစ်၊ စနစ်သစ်၊ သင်တန်းအသစ်မှ သည်... မြန်မာအစားအစာ လျှာလည်စရာနဲ့ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်... တွေးရယ် ရယ်တွေး(ဒေါက်တာ ဂျိုကာ) ... ဆရာ အိမ်သာနှင့် အိမ်သာပြဿနာ... ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ခြင်း ဖြင့် အနာဂတ်တွင် အပြုံးပန်းများ ဝေပါစေ... အလွမ်းပြေဖိုးထူး... ဥရောပမီးဖွားခွင့်... အရေးပေါ် အသက်ကယ်နည်း... ဘိန်းဖြူထက် ပိုဆိုးတဲ့အရက်... ငှက်ဖျား ကာကွယ်ဆေး နောက်ဆုံး အခြေအနေ... ကာကွယ်ဆေးပလာစတာ... အိပ်မက်ဖမ်းကိရိယာ... ဆင့်ပွားဆေးလိပ် အန္တရာယ်... ကြောက်ရွံ့မှုရဲ့ ဇစ်မြစ်... သွေးတိုးရောဂါအတွက် ကြက်သွန်ဖြူ... အားနွဲ့သူယောက်ျားသား...
Title: "Nightingale Journal", November 2010/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၀
Description/subject: အသက်အန္တရာယ်ကို ဒုက္ခပေးသည့် သန်ကောင်... ရွေးကောက်ပွဲလွန် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခနှင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအရေး... ပြောင်းရွှေ့လျှင် အခက်အခဲရှိဟု HIV/ AIDS ဝေဒနာရှင်များ ပြော ... တူညီစွာဖေးမ လှပမယ့် ဘ၀... မယ်တော်ဆေးခန်းရောက် လူနားများ၏ ရင်ဖွင့်သံ... ဖိုးဘီးယား... လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ... လူထုကျန်းမာရေး လုပ်သား သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲခြင်း... စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များနဲ့ လျှပ်တပြက်ကျန်းမာရေး... အကျင့်ဆိုးတွေကြောင့် တိုသွားနိုင်တဲ့ သက်တမ်း... မယ်တော်ဆေးခန်းအပ်စိုက်ဌာန တာဝန်ခံ စောလယ်ဝါးစေးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း... သေခြင်း ကောင်းနှင့် သေခြင်းဆိုး... လက်ညှိုး၏ အရှည်က ဆီးကြိတ်ကင်ဆာ သဲလွန်စ... ကလေးငယ်တွေကို ဆေးတိုက်တဲ့ အခါ... ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျ မှုကြောင့် နှလုံး ထိခိုက်မှု အန္တရာယ် ပိုဖြစ်နိုင်... စီဒီစီ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်၏ (၅၁) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အခမ်းအနား....
Title: "Nightingale Journal", September 2010/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၀
Description/subject: ချစ်စိတ်တည်ရာ အသည်းနှလုံးလား ဦးနှော က်လား... A(H1N1) သတိမပြတ်စောင့်ကြည့်... မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကလေးငယ် (၂) ဦး ၀က်တုပ်ကွေးဖြစ်... တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် မယ်လအူး စခန်းတွင် စာသင်ကျောင်း အားလုံးပိတ်ထားရ... ခင်ဗျားတို့ နားမှာ ကြွက်တွေ ရှိရင် သတိထား... ကိုယ်ဝန်အဆိပ်တက်နာနှင့် ဘေးမသန်းဘဲအေးချမ်းစေချင်... ဟုတ်ကဲ့ --ဟုတ်ကဲ့... စိတ်ကူးယဉ်လျှင်... အရက်ရဲ့ ဆိုးကျိုး (၃) ... ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားတီထွင်သူ နိုဘယ်ဆုရ... ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ရောဂါ... ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား ကစားမှုနှင့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ... အရက်ကြောင်...အားနည်းသူတို့ အားထားရာ... ကျောက်ပန်းတောင်းတွင် ကူးစက်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးမှုများရှိပြီး ကျောင်းများပိတ်ထားရ... ကလေးအမေနဲ့ ကလေး အဖေ... ကင်ဆာလက္ခဏာ (၈)ခု ... မျက်မှန်ခေတ်ကုန်တော့မလား... ပရုပ်ဆီမဟုတ်တဲ့ အကိုက်အခဲ ပျောက်လိမ်းဆေး... နောက်ဆုံးပေါ်မီးဖွားသတင်းများ... ၀က်တုပ်ကွေး ကမ္ဘာ့ကပ်ဘေးပြီးဆုံး... ကားစီးရင်းဆေးလိပ်သောက်တာ ကလေး ညှဉ်းပန်းမှု... အရက်သည်ဆေး... ပိန်ချင်ရင်ရေသောက်... အနာတခြား ဆေးတခြား ဗိုင်ယာဂရာ... ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ပြီးတော့ရေသန့်ဘူး...
Title: "Nightingale Journal", August 2010/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- သြဂုတ်၊ ၂၀၁၀
Description/subject: ထားဝယ်ခရိုင်မှာ တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားသူများနေ... ကချင်ဒေသ၌ HIV ကူးစက်မှု မြင့်မား... ထိုင်း- မြန်မာနယ်စပ်မှာ မိုင်းနင်မိတဲ့ ဆင်မကြီး... အရေပြားရောဂါ ဖြစ်ပွား၍ ကလေးငယ်များအတွက် စိုးရိမ်ရ... လုပ်သက်ရင့်ဆေးဝန်ထမ်းများမွမ်းမံ သင်တန်းဆင်ပွဲ ကျင်းပပြီးစီး... ကျန်းမာရေး ပေါ်လစီနှင့် ကျန်းမာရေးစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး... အလုပ်သမားများအကြား HIV/ AIDS ကူးစက်နှုန်း(၃) ရာခိုင်နှုန်းရှိဟု ပတ်ထနာရပ်ပြော... အမျိုးသမီးတွေ HIV ရောဂါပိုး မကူးစက်အောင် ကာကွယ်နိုင်မယ့် ဆေး... HIV ရောဂါပိုးရှိသူမိခင် ARV ဆေးပုံမှန်စားသင့် ... ပြေး ပြေး ပြေး ... မိခင်ကလေး ကျန်းမာရေး နို့ချိုတိုက်ကျွေး အလေးပေး... အသံတွေကြားနေရတယ်နဲ့ ဘာလဲ ဟဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားက ပေးတဲ့ရောဂါ(ဘောလုံးရောဂါနှင့် လူထုကျန်းမာရေး... မေးခိုင်ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ... ပို၍သာသော ကျေးဇူး... အန္တရယ်ကြီးမားသော တိရိစ္ဆာရောဂါများ လူသားတို့အားကူးစက်မှု... ကင်ဆာရောဂါ ကူထုံးသစ် ကင်ဆာကာကွယ်ဆေး... အရက်ရဲ့ ဆိုးကျိုး( ၂) ... နဂိုအတိုင်းပဲ ကောင်းပါတယ်... မုသာဝါဒ... ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ကြီးအတွင်းက ခြစားမှု ... အရေးပေါ်သွေးတိတ်ဆေး... သိပ်မနမ်နဲ့ နားလေးသွားမယ်... တနေ့ နှစ်ခါသွားတိုက်ပါ ကျန်းမာသန့်ရှင်းနှလုံးရောဂါကင်း... ရင်သားကင်ဆာ ကာကွယ်ရေး... သန္ဓေသားလောင်း အသက်ဝင်ချိန်... ဘီယာသမားများ ၀မ်းမြောက်ဖွယ် ... လက်ကိုင်ဖုန်း အန္တရာယ်... လက္ခဏာပညာကို ထောက်ခံတဲ့ ဆေးပညာ...
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/aug10.pdf
Date of entry/update: 31 December 2011
Title: "Nightingale Journal", May 2010/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- မေ၊ ၂၀၁၀
Description/subject: ငှက်ဖျားမှ သည် ချီခွန်ဂန်ယား (သို့မ ဟုတ်) ခြင်ကြောင့် ဖြစ် တဲ့ ရောဂါများ... မြန်မာပြည်သူများ၏ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲကို ကူညီဖြေရှင်းရေး... မောင်တောမြို့တွင် တုပ်ကွေးရောဂါဆန်းတမျိုးကျယ်ပြန့်စာ ဖြစ်ပွားနေ အပူရှိန်မြင့်မားမှုကြောင့် ခွေးများလည်း သေဆုံးမှုရှိ... ရေးမြိုနယ်အတွင် ၀မ်းပျက် ၀မ်းလျှောရောဂါကြောင့် သေဆုံးမှုရှိ... ဒလ ရေပြတ်လပ်မှု ဆိုးရွား... ပြည်သူများ ရေခက်ခဲမှု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စိုးရိမ်... မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငှက်ဖျားရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေး ဒေါ်လာသန်း (၂၀) လိုအပ်... ရေသိုးလှောင် သောက်ရသည့်ရွာတရွာ သောက်ရေ ပြတ်လပ်နေ... ကိုယ်ဝန်ဆောင် စဉ် အရင်လို နေလို့ ရသလား... ၀ိပါက် ကြမ္မာရှိခဲ့ပါလျှင် ... ပူတယ်- ပန်းတယ် ပြင်ကြမယ်(ပသုံးလုံးနှင့် လူထု ကျန်းမာရေး)... အလုပ်များသူတွေနဲ့ ဂေါ့ဒ်ရောဂါ... တိုက် (ဒေါက်တာရေမီးရှား)... ပြတ်တောက်သွားသော အိပ်မက်များ... စိတ်အပန်းဖြေခြင်း... အရက်ရဲ့ ဆိုးကျိုး (၁)... အပူလှိုင်း ဒဏ်ကြောင့် လူအသေအပျောက်များ... အသက်(၅) နှစ်အောက် ကလေးများ ၀က်သက်ရောဂါ အဖြစ်များ... သွားကြိတ်အကျင့် ပျောက်ကင်းဖို့ ... စိတ်မချရတဲ့ ဓါတ်မှန်... တတိယ ဆင့်ပွားဆေးလိပ် အန္တရာယ်... အိုဗာတိုင်၊ အိပ်ချိန်နဲ့ ကျန်းမာရေး... သွေးတိုးကုထုံးသစ်နဲ့ ဆရာဝန်ပြဿနာ... သိင်္ဂါရဟော်မုန်း... ကလေးနဲ့ ကာကွယ်ဆေး... ဆယ်ခြောက်နှစ်မတွေ အရက်သောက်တော့... မီးခိုးမဲ့ ဆေးလိပ်... ကြက်တုပ်ကွေး၊ ၀က်တုပ်ကွေးပြီးတော့ ဆင်တုပ်ကွေး (ချီခွန်ဂန်ယားရောဂါ သတိပြုစရာ) ... အိမ်တွင် အကြမ်းဖက်မှု ပြောင်းပြန်...
Format/size: pdf (776K)
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/may10.pdf
Title: "Nightingale Journal", March 2010/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- မတ်၊ ၂၀၁၀
Description/subject: မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်များ အသင်း(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)၏ ပဉ္စမအကြိမ် ညီလာခံကို လွတ် မြောက်နယ်မြေတနေရာတွင် ကျင်းပ... ပဉ္စမအကြိမ် ညီလာ ခံနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး... အရည်အသွေးရှိတဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာဖို့... မွေးကင်းစ အသားဝါရောဂါ... စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် ကြက်တုပ်ကွေးဖြစ် ကြက် သောင်းချီ ဖျက်ဆီး... လူမှုရေးအကူအညီ ယူရို (၁၇)သန်း မြန်မာနိုင်ငံကို အီးယူ က ပေးမည်... မယ်လစခန်းအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ
ဖြစ်ပွားမှု ပိုတိုးလာ... မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးနိုင်ငံတကာ ဥပဒေကို မြန်မာ လိုက်နာမှု မရှိ... သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၏ 'ဘာလဲဟဲ့ လူ့ငရဲ' စာအုပ် ဖြန့်ချိ... ဇိုယာဖန်း ကမ္ဘာ့လူငယ်ခေါင်းဆောင် ရွေးချယ်ခံရ... ဒုက္ခသည်များ ဒုက္ခသစ် မရှာကြပါနဲ့ ... ဒီလမ်း ဒီစခန်း ပန်းတိုင်အရောက်
လမ်းဆက်လျှောက်မယ်ဗျို့ ... တူညီသော အခွင့်အရေး တူညီသော အခွင့်အလမ်း (သို့မဟုတ်) အမျိုးသမီးများရဲ့ ကျန်းမာရေး တိုက်ပွဲ ... ရေထဲခုန်ချခြင်းနှင့် ရေထဲရိုက်ချခြင်း... မဇျ္စိ မပဋိပဒါ နေထိုင်မှုနဲ့ သောကကင်းဝေး ကျန်းမာရေး... ရင်သားကင်ဆာအကြောင်း သိကောင်းစရာ... သားကောင်များ... ကိုအ၀ှာနဲ့ ပျိုကညာတို့ရဲ့ တိုနာ ... မှန်မှန်စားပါ... လိင်တူ ဆက်ဆံသူ၊ မူးယစ်ဆေးသုံးသူနှင့် ပြည့်တန်ဆာများအကြား HIV ပိုး ကူးစက်မှု နှုန်း မြင့်မား... ငှက်ပျောသီးတွင် ပါဝင်သည့် ဓာထုပစ္စည်းတမျိုးက အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ပိုး ကူးစက်ခြင်းကို တားဆီးနိုင်...
Format/size: pdf (895K)
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/mar10.pdf
Title: "Nightingale Journal", December 2009/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၉
Description/subject: အဆုတ်နာ တီဘီဘေး ကာကွယ်ပါ မနှေး... မြန်မာ မိခင်လောင်း (၃၂) ရာခိုင်နှုန်း အကူ အညီမဲ့မွေးဖွား... အလေးထားရမည့်ကျန်း မာရေးပြဿနာ တီဘီရောဂါ... ခွဲစိတ်သေဆုံးမှုသတင်းများကို ပြည်တွင်း၌ပိတ်ပင်... အကျဉ်းသား (ရဝဝဝ) အတွက် ဆရာဝန်တဦးသာရှိ... နို့ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်းတွင် တတိယနိုင်ငံ ထွက်ခွာရန်
စောင့်ဆိုင်းရသူများ ဆန္ဒပြ... မသန်မစွမ်းသူများအတွက် ဂျပန်အဖွဲ့ အစည်း ကူညီမည်... လူနာ အခွင့်အရေး... ဒုက္ခသည် အမျိုးသမီး များ အပေါ် နှိပ်စက်မှုများ ထိုင်းနိုင်ငံ ဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်ရန် အိုင်အာစီ ကူညီ... ဟောဒီ ဆောင်းတွင်းခါမှာဒါတွေ ဒါတွေ ဒါတွေ သတိပြု ပါ ရောင်း ရင်းရာ... ဆုများများ ဒဏ်နည်းနည်း(သို့မဟုတ်) ရိုက်နှက် ဆူ ပူ ကြိမ်းမောင်း မှုမဲ့ ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း... ကြော်ငြာဒါရိုက်တာမင်းမိုက်စိုးစံရဲ့
ဆေးကျော်ညာများ... လူနာနှင့် ဆေး၊ ဆေးနှင့် လူနာ... ဖျက်ဆီးတတ်သောမန်... လူတုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး အရွေးခက်နေခြင်း... ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းများ လိုက်နာဖို့ ကျင့်ဝတ်... နိုင်ငံတကာမှ ကျန်းမာရေးစနစ်များ... ဖခင်လောင်းတွေ မွေးခန်းထဲ ဝင်သင့် မဝင်သင့်... နားနဲ့ မနာ ဖ၀ါးနဲ့ နာဆိုတာ ... နိုင်ငံတကာ ဆေးသတင်း အတိုအထွာ... အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ/ အေ အိုင်ဒီအက်စ် ကုသရေးလမ်းညွှန်သစ်... ခပ်ပျော့ပျော့ ဝက်တုပ်ကွေး... ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတွေ 'ကဲ'ရင်
သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာနဲ့ တွေ့မယ်... ဆီစားများရင် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်... လူပျိုဘ၀မှာ 'ကဲ' ရင် ပရေစတိတ်ကင်ဆာနဲ့ တွေ့မယ် လူအိုဘ၀မှာ ကဲ ရင် ကင်ဆာနဲ့ဝေးမယ်... အန္တရာယ် ကြီးဆဲ ဆေးလိပ်၊ အိပ်ရာ နိုးနိုးချင်း ဆေးလိပ် မသောက်နဲ့ ...
Format/size: pdf (906K)
Title: "Nightingale Journal", November 2009/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၀၉
Description/subject: တတိယမြောက် အိုအေစစ် ... ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အဓိက ကျသော သွေးစည်းညီညွတ်မှု ... မတူကွဲပြား မှုများ ပေါင်းစည်း ရန်မွေးနေ့ တွင် ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် တိုက်တွန်း...အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဝေဒနာရှင်များအတွက် ARV ဆေးလိုအပ်ဆဲ... အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာရှင်များ မဲဆောက် တွင် နှီးနှော ပွဲ ပြုလုပ်မည်... ဂလိုဘယ်ဖန်း အဖွဲ့ က မြန်မာ ကို ပြန်လည် အကူအ ညီပေးမည်... မကူးစက်တတ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ (သို့မဟုတ်) အဖြစ်များလာတဲ့ ဆီးချို/ သွေးချို... ရွှေရတုဘောလုံးပြိုင်ပွဲလား-- ဆောရီး... ဒီမယ် မိတ်ဆွေတို့ အဖေါ်ဆောင်ရင် ညှော်တောင် ရှောင်စရာ မလိုဘူးမှတ်ပါ... ရန်ကုတ်တွင် သွေး လွန်တုပ်ကွေးကြောင့် သေဆုံးသူများ.... ဆေးပညာ သူတေသန ကျင့်ဝတ်နဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး... A(H1N1) တုပ်ကွေးကြောင့် တရုပ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကျောင်းများ ပိတ်လိုက်ရပြီ... ရွှေတံခါးကြီးဖွင့်ပါဦး ငွေတံခါးကြီးဖွင့်ပါဦး... ကလေး ကစားခြင်း (သို့မဟုတ်) ... အနီးမီးယား (ခေါ်) ဒုက္ခသည် ရောဂါ တမျိုး... ကုစရာနတ္ထိ ဆေးမရှိတဲ့ နအဖလက်အောက်က ဆေးရုံတွေ ... အိဒိစ်ရောဂါ ဖြစ်မလာတဲ့ အိပ်ချိအိုင်ဗွီ သမား... ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အေ့စ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး... နှလုံးရောဂါနဲ့ တရာ ဘာဝနာ... အရက်- အဆိုးနဲ့ အကျိုး ... သွေးအတွင် အဆီဓါတ်စစ်ရာမှာ အစာငတ်ခံစရာ မလိုပါ... ဗြိတိန်မှာ ဆေးမတိုး ၀က်တုပ်ကွေး ပျံ့နှံ့... ပလပ်စတစ်ကြောင့် ကလေး "ခြောက်" သွားနိုင်တယ်... အမျိုးသမီးများ ၀မ်းမြောက်ဖွယ်... အလိုလိုပျောက်တဲ့ ကင်ဆာ...
Format/size: pdf (880K)
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/2009_nov.pdf
Title: "Nightingale Journal", October 2009/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၀၉
Description/subject: ယော်က်ျား ဖောင်စီး မိန်းမမီးနေ... ရွာပုန်းရွာရှောင် များ၊ ရွှေ့ပြောင်း နေ ထိုင်လုပ်ကိုင်သူများနျင့် တကျော့ပြန်ဝက်တုပ်ကွေး အန္တရာယ်... ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း အကောင်းဆုံး... ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့လိုသူများအတွက် မြေပဲဆံ... ၀က်တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားသူ (၆၃) ဦးရှိပြီလို့ ကျန်းမာရေး ညွှန်ချုပ် အတည်ပြု ပြောဆို... ကိုယ်ဝန်သည်များငါးစားပါ... ငှက်ပျောသီးတလုံးစားလျှင်... အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဝေဒနာရှင်များ အတွက် ဆေးခက်ခဲ... မယ်တော်ဆေးခန်းရှေ့နှစ် အတွက် ရန်ပုံငွေ နှစ်ဆတိုးလိုအပ်... အလေးထားရမည့် သွားကျန်းမာရေး ... ငှက်ဖျားရောဂါ ကိုယ်ချင်းစာ... ဒီမယ်ဗျို့---ဆီးချိုချို၊ သွေားချိုချို ဘာပဲ ချိုချို ဒါကို သတိပြုကြနော်... ဒါဖတ်ပြီးမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပါ... ဆနွင်းရဲ့ အစွမ်း... ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေး... မြောက်ဥက္ကလာပ၊ ကန်ဘဲ့မှ သည် ၂၇ လမ်းသို့ ... ငရဲပြည်ရောက်ဆရာဝန်တယောက်... အသက်(၅) နှစ်အောက် ကလေးများ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ အဖြစ်များ... ကွန်ပြူတာ အမြင်အာရုံ ရောဂါ... ဆင်ထောက်ရောဂါကာကွယ်ရေး... အိမ်တွင် အကြမ်းဖက်မှု ဘက် နှစ်ဘက်... ကလေးကို ဘယ်အရွယ်မှာ ကျောင်းစထားမလဲ... ဖယောင်းတိုင် အန္တရာယ်... ဤအရာကား ထားဆီး၍ မရပါ... အမေရိကန်နိုင်ငံ မှာ ၀က်တုပ်ကွေးကို အရေးပေါ် အခြေအနေကြေညာ... လင်မယားတွေ တအိပ်ယာထဲ အတူတူ မအိပ်နဲ့ ... နိုင်ငံတကာကျန်းမာရေး စနစ်များ... သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် လျှို့ဝှက်ချက်... ငှက်ဖျား ပိုးသစ်... ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ ကုထုံးသစ်... သွေးတိုးဘယ်လောက်အထိချမလဲ... အလားအလာကောင်းတဲ့ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ကာကွယ်ဆေး... ပါရာစီတမောနဲ့ ကလေးကာကွယ်ဆေး...
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/2009_oct.pdf
Title: "Nightingale Journal", August 2009/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- သြဂုတ်၊ ၂၀၀၉
Description/subject: လက်စင်စွာဆေး သင့်အတွက် ကျန်းမာရေး... နယ်စပ်ဒေသ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရေး ၀ိုင်းဝန်ကြိုးပမ်းကြစေလို... ကျောင်းသား (၅) ဦး ၀က်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွား... မွန်ပြည်နယ်တွင် တုပ်ကွေး ရောဂါတမျိုးပျံ့နှံ့... HIV ပိုးကူးခံရပြီး AIDS ဝေဒနာရှင် အဆင့်ရောက်ရန် လိုအပ်တဲ့ အချိန် ကာလ... နိုက် တင်ဂေးလ် ပေးစာကဏ္ဍ... မလေးရှားရှိ အချုပ်က မြန်မာ များ ကျန်းမာရေး စိုးရိမ်ရ... မြန်မာ အမျိုးသမီးများအား လိင်ကုန်ကူးမှု ကြီးထားလာကြောင်း အစီရင်ခံစာ တစောင် ထွက်ပေါ်... HIV မိခင်နို့ တိုက်ကျွေးမှု သုတေသန... မယ်လ စခန်းတွင် A(H1N1) သံသမယရှိသူများကို စစ်ဆေး... အင်နာဂျက်ဆင်ဆေးဝါး အတုများ ဈေးကွက်တွင် တွေ့ရှိ... ပွေး၊ ၀ဲ၊ ယားနာရောဂါ ထိရောက်စွာက ကုသပါ... လူထုက သဘောပေါက်ပြီးသား ရိုးရိုးလားရှယ်လား ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ... ဒါဖတ်ပြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုပါ... ၀က်တုပ်ကွေး လျှို့ဝှက်ချက်များ... ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး... အလေးထားရမည့် သွားကျန်းမာရေး... ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ခြင်း အနုပညာ... သတိရမိသော လူနာများ... အရွယ်သုံးပါး မိန်းမသား၏ မူဟန်အဆင့်... စွန့်စားလိုသော အမျိုးသမီးများ လိင်စိတ်ပြင်းထန်... ကျနော်ကျမတို့ အားလုံးတာဝန်ရှိပါသည် ၀ိုင်းဝန်းကာကူညီ... အိဒ်စ် ကာကကွယ်ဆေး အခြေအနေ... ဆရာဝန်တချို့တောင်ယုံနေတဲ့ ကျန်းမာရေး အသိလွဲများ... ပါရာစီတမောပြဿနာ... သည်းခြေကျောက်ကာကွယ်ရေး... နည်းနည်းလောက်သောက်ပေး... ကလေးလိုချင်ရင် နေ့တိုင်းကြိုးစားပါ... အားရပါးရ ဆဲပစ်လိုက်စမ်းပါ... အဆစ်လွဲတာ အပူနဲ့ကုမလား၊ အအေးနဲ့ ကုမလား...
Format/size: pdf (967K)
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/2009_aug.pdf
Title: "Nightingale Journal", May 2009/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- မေ၊ ၂၀၀၉
Description/subject: ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ... တရုတ်ငှက်ဖျားဆေး အတုကြောင့် နယ်စပ်လူထု ဒုက္ခရောက်... ၀က်တုပ်ကွေး သတိရှိကြစေဖို့ ... ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာ ကလေးများ ကလေးအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကြုံတွေ့နေရ... မယ်လဒုက္ခသည် စခန်းတွင် မြန်မာပြည်မှထုတ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းအချို့ မသုံးစွဲရန် တားမြစ်ချက် ထုတ်ပြန်... ပြောင်းလဲမှု တခု၏ ရာဇ၀င်... မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုနှစ်အတွင်း အေအိုင်ဒီအက်စ်ကြောင့် လူ ၂၅,ဝဝဝ အထိ သေဖွယ်ရှိ... စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းကြား ယာဘသုံးစွဲမှု ကျယ်ပြန့်တိုးပွားလာ... ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဝက်တုပ်ကွေးအန္တရာယ် တပ်လှန့်ထား... AH1N1 တုပ်ကွေး ကာကွယ်ရေး အာရှနိုင်ငံများ ဆွေးနွေး... ကလေးသူငယ်များကြား ပွေးဝဲယားနာ ရောဂါ အဖြစ်များ... တိုးချဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုး စီမံချက်၏ ပစ်မှတ်ရောဂါများအကြောင်း (မိတ်ဆက်) ... နွေရာသီပူပြင်းသမို့ အိုအချင်းတို့ရေ... ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဆေးတလက်... ဆိုးဆေးပါ လက်ဖက်၊ အစားအစာနှင့် ခဲဆိပ်ပါတိုင်းရင်းဆေး... ပေါ့စေလို၍ ကြောင်ရုပ်ထိုး ဆေးအတွက်လေးကြသူများ... ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး... ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ကန်ရေကြောင့် ဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားသူများ... အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါဖြစ်တာ လူ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေသလား... ၀က်တုပ်ကွေးကို ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်ဖို့ WHO သတိပေး... ၀က်တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး ဖော်စပ်နိုင်ရေး သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ကြိုးပမ်း... ဝက်တုပ်ကွေး အဆင့် ၅ အထိ ရောက်ပြီ... ဝက်တုပ်ကွေး လူကတဆင့် ဝက်ကိုပြန်ကူး... မဲဆောက်မြို့၌ ကလေးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စင်တာ (CDC) ကျောင်း ဆောင်သစ် ဖွင့်ပွဲကျင်းပ... ၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါ ကာကွယ်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်များအသင်း ၌ ကျင်းပ...
Format/size: pdf (867K)
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/2009_may.pdf
Title: "Nightingale Journal", February 2009/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- ဖေဖေါ်ဝါရီ၊ ၂၀၀၉
Description/subject: မယ်တော် ဆေးခန်းနှစ် (၂၀) ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပ... နှစ် (၂၀) မယ်တော်ဆေးခန်းနှင့် လူမှု အခြေပြု အဖွဲ့ အစည်းများ၏ အရေးပါမှု... ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်အား မယ်တော်ဆေးခန်း အနှစ် ၂၀ ပြည့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းခြင်း... လူပျောက်ကြော်ငြာ (ကဗျာ) ... ကျန်းမာရေး ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု အိုဘားမားအတွက် အကြီးဆုံး အကဲစမ်းမှု... ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့တွင် မြန်မာ အလုပ်သမားများအား ပထမဆုံးအကြိမ် ထိုင်းဆရာဝန်ရောဂါစစ်ဆေး... အသက်ရှူကြပ်သေဆုံးသူမြန်မာများအတွက် ထိုင်းကုမ္ပဏီ ကလျော်ကြေးပေး... မြန်မာပြည်တွင် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး မရှိ၊ လည်လိမ်ရောဂါသာရှိဟု FAO ပြော... သားဆက်ခြားမှ မျိုးပွားဂုဏ်တင့်မည်... နာဂစ် အလွန်လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို အရေးယူရန်တောင်းဆို... ဆရာဝန်ကောင်း ဆရာဝန်ဆိုးနဲ့ ဟစ်ပိုကရေးတီး... အကြမ်းရေဟာ အနွမ်းဖြေစရာပါဗျာနှင့် ဘလော့ဂ် ရောဂါ... စရိတ်မျှပေးကျန်းမာရေးနျင့် ဗူးလေးရာ ဖရုံဆင့်တဲံ ပြည်သူ့ ဆေးရုံ... နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဆေးရှာပုံတော် ဖွင့်သူများ (သို့မဟုတ်) နယ်စပ်သို့ရောက်ရှိလာသော တီဘီရောဂါသည်များအကြောင်း တစေံတစောင်း... မယ်လမင်းအန္တရာယ်ကင်းဝေးရေး မိခင်နို့ကို ဦးစားပေး... ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့ အခွင့် အရေး ဆွေးနွေးခန်း... အကန်းအိပ်မက်... အထင်နဲ့ အမြင်... သွားနှင့် ခံတွင် ကင်ဆာရောဂါ... နော်နီ (သို့မဟုတ်) ဆေးဖက်ဝင်ရဲယိုပင်... တတိယ ဆင့်ပွားဆေးလိပ် အန္တရာယ်... အမာရွတ်မဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှု... ဆေးမြီးတိုယုံတမ်းစကားများ... ကာကွယ်ဆေးလိမ် တိုင်းပြည်များ.... ငှက်ဖျားပြဿနာ... သဘာဝမဟုတ်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်... လူဝများ သတိထားစရာ... ဆေးသတင်း အတိုအထွာ... မယ်တော်ဆေးခန်း နှစ် (၂၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ် မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံပြပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ... ငါးမျိုးပေါင်း ကာကွယ်ဆေး... အရက်ဖြတ်ဆေးသစ်... ပိုလီယိုတိုင်းပြည်...
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/2009_feb.pdf
Title: "Nightingale Journal", October 2008/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၀၈
Description/subject: အမေရိကန် သမ္မတကတော်လောရာဘုရှ်၏ မယ်တော် ဆေးခန်းလေ့ လာရေး ခရီးစဉ်... အမေရိကန်သမ္မတ ကတော်နှင့် မြန်မာ့အရေး အားပေး ကူညီမှုများ... အမေရိကန်သမ္မတ ကတော် လော်ရာဘုရှ် ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မဲဆောက်မြို့၊ မယ်တော်ဆေးခန်းမှ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် နှင့် တွေ့ ဆုံ မေးမြန်းခန်း... မယ်တော် ဆေးခန်းတွင် ယခုနှစ် မျက်စိကု ဝေဒနာရှင်ပိုမိုများပြားလာ... မွေးရာပါ နှုတ်ခမ်းကွဲနေသူကလေးငယ်များကို ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွင် ခွဲစိတ်ကုသပေး... တရုတ်ပြည် နို့ မှုန့် သုံးစွဲမှုကြောင့် မြန်မာ ကလေးငယ်တဦး အသက်သေဆုံး... မိခင်နို့ကိုအားကိုးဖို့ ယူနီဆက်ဖ်တိုက်တွန်း... မြန်မာကော်ဖီထုပ်များတွင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော မယ်လမင်းဓတ်တွေ့ရှိ... တရုတ်နို့မှုန့် အတုအန္တရာယ် ကင်းဝေးရေး မိခင်နို့ကိုသာ ဦးစားပေး... စိတ်ဖိစီးမှု ဆက်နွယ်ရောဂါများနှင့် ဆေးချက်များ... ရှောင်လေဝေးဝေး အရက်နဲ့ မူးယစ်ဆေး... ချောက် ကမ်းပါး နှုတ်ခမ်း ပေါ်မှ အကြွေပန်းတို့ရဲ့ ဘ၀... အမေ့သမီး ဆေးမှူးကတော်နှင့် ဗိုက်တာမင်စီ ... ကွမ်းဝါး၊ ကွမ်းစား ဆေးရွက်ကြီး ငုံခြင်း အန္တရာယ် များ... ဆေး သိပ္ပံ နဲ့ နိုင်ငံရေး... သေတ္တာထဲမှာပဲ နေမယ်... ကျနော်၏သွားများ... ထိုင်ရာမထလေ့ကျင့်ခန်း... သွေးထုတ်ရင်လက်သီးမဆုပ်နဲ့... ဆေးသတင်းအတိုအထွာ... ကလေး ပါရာစီတမောနဲ့ ပန်းနာ ရောဂါ... ငှက်ဖျားကာကွယ်ဆေး... ခွဲစိတ်ကုလောကမှ တော်လှန်ရေးများ... လိင်ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပါ စိတ်ဖိစီးမှု သက်သာ... ကင်ဆာပျောက်ပြီ... ၂၀၀၈ ခုနှစ် အတွက် ဖဲပြားနီဆုကို Social Action for Women (SAW) အဖွဲ့ လက်ခံရယူ... ကလေးကျန်းမာရေး ပြင်ပလူနာ ဌာန မယ်တော် ဆေးခန်၊ မဲဆောက်မြို့ ...
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/2008_oct.pdf
Title: "Nightingale Journal", July 2008/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- ဇူလိုင်၊ ၂၀၀၈
Description/subject: ကိုယ်တွေ့ရန်ကုန်နာဂစ်... မွန်မြတ်သော စိတ်စေတနာကောင်းများဖြင့်... မုန်တိုင်းသင့်လူထု (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းကျော် သောက်သုံးရေသန့် လိုအပ်နေဆဲ.... မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များအား ထိရောက်စွာမကူညီလျှင် ငတ်ပြတ်သေနိုင်... အသဲရောင် အသားဝါရောဂါ ကင်းစင်ပါစေ... အသက်မသေ ကျန်ခဲ့သူကလေးအများ စိတ်ဒဏ်ရာ ရနေ... နိုဘဲလ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင် ဂျိုဒီဝီလျံနှင့် အဖွဲ့ကို မယ်တော်ဆေးခန်းမှ အခမ်းအနားဖြင့် ကြိုဆို... မီးအိမ်ရှင်အမေ.... ခွေးရူးပြန်ရောဂါအား အစဉ်သတိထား... တီဘီဟုတ်လား ဆေးမှန်မှန်သောက်ရင်ပျောက်တယ်ဗျို့... အစားအသောက်အပြင်အဆင်၊ အရောင်းအချနှင့် ဘေးဥပါဒ် အန္တရာယ်များ... ငြုပ်သီးမှိုတက် ပဲ မှိုတက် အသည်းကို ဖျက်... အားလုံးကြောက်သည်... ဆေးမလိုက်နိုင်သော စိတ်များ... အိပ်ရင်းဟောက်သူများနဲ့ နေ့ခင်း တရေး အိပ်သူများ သတိထား... လိင်ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပါ သက်ရှည်ကျန်းမာ... ဗီတာမင်အီးအကျိုးအပြစ်... အရက်သမားများ ၀မ်းမြောက်ဖွယ်... သွေးတိုးကာကွယ်ဆေး... လက်ပ်တော့ကွန်ပြူတာနဲ့ ဖိုသတ္တ၀ါ... ချစ်ခြင်း၏ ဇီဝဗေဒ... ငှက်ဖျားနဲ့ လူသားတိုက်ပွဲ... ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အယူမှားများ... နာဂစ်အလွန် စစ်ဖိနပ်အောက် က ဒုက္ခသည်ပြည်သူတွေ...
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/2008_jul.pdf
Title: "Nightingale Journal", February 2008/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- ဖေဖေါ်ဝါရီ၊ ၂၀၀၈
Description/subject: သွေးလွန်တုပ်ကွေး အန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်...
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/2008_feb.pdf
Title: "Nightingale Journal", June 2007/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- ဇွန်၊ ၂၀၀၇
Description/subject: ညှိုးနွမ်းပန်းတို့လန်းရာမြေ.... သူနာပြုသင်တန်းနှင့် လူထုကျန်း မာရေး စေတနာ့ဝန်ထမ်း သင်တန်း မယ်တော်ဆေးခန်းတွင် ဖွင့်လှစ်... ပြည်သူတွေ အတွက် တိုးတက်လေ့လာ ကျန်းမာရေး အသိပညာ... လွဲမှားနေသော ကျန်းမာရေး အသိများ... လူထုကျန်းမာရေး လုပ်သားနည်းပြသင်တန်း ထိုင်း- မြန်မာနယ်စပ်တနေရာတွင် ဖွင့်လှစ်ပြီးစီး... အာရောဂျံကိစ္စ (ကဗျာ) ... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၂ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် စုပေါင်း သွေးလှူဒါန်းပွဲကို မယ်တော် ဆေးခန်း တွင် ပြုလုပ်... ဟင်နရီဒူးနန့်... သွေးတိုးဆိုတာ ဘေးဆိုးတမျိုးပါ အရပ်ကတို့ ... ဆယ်ကျော်သက်နှင့် မူးယစ်ဆေး... မိခင်နို့ရည်သည်သာ ရင်သွေးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်... တိတ်ဆိတ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါ... ကမ်းလင့် လက်ကို မျှော်နေသူများအတွက်... ကြက်ဆူတွေ မင်းမမူနိုင်တဲ့နေ့ ... ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါကို ကုသခြင်း... အပျင်းထူ၍ အစားပုတ်သူများနှင့် ဆီးချိုရောဂါ... လက်ဖက်ရည်နဲ့ ကော်ဖီထောက်ခံချက်များ... လေမှုတ်တူရိယာပညာရှင်များ လည်ချောင်း ကင်ဆာ သတိထား... သက်ကြီးအရိုးကျွတ်ဆတ်ရောဂါ အတွက် မျှော်လင့်ချက်... အစားလျှော့စားရင်အသက်ရှည်... ပါးစပ်ချင်း တေ့ အသက်ရှူကူတာမေ့လိုက်ပါ... သံလိုက်နဲ့ကျန်းမာရေး... လိုတရ အက်စ်ပရင်... ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် အရက်... တကျော့ပြန် ပိုလီယို အကြောသေရောဂါအား ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ်တိုက်ဖျက်ကြစို့ ...
Source/publisher: Mao Tao Cllinic မယ်တော် ဆေးခန်း
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/2007_jun.pdf
Title: "Nightingale Journal", March 2007/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- မတ်၊ ၂၀၀၇
Description/subject: ရွှေဟင်္သာပျံမှာစိုး ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ လူတွေမှာတိုး... ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးနှင့် ကျန်းမာရေး သတိ... နယ်လှည့်ကျော်ပိုးအိတ် ကျန်းမာရေး လုပ်သားအဖွဲ့ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးနှင့် (၁၇) ကြိမ်မြောက် (၆) လပတ်ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ... အမျိုးသမီး ကွန်ဒုံးသင်တန်း နောက်ဆက်တွဲ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ မယ်တော် ဆေးခန်းတွင် ပြုလုပ်... ကျိန်စာ (ကဗျာ)... လူမျိုးစုဒေသများတွင် ရိုးရာ လက်သည် သင်တန်များပို့ချ... အရေးပေါ်သားဖွားခြင်းဆိုင်ရာ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု မွမ်းမံသင်တန်း မယ်တော် ဆေးခန်းတွင် ပြုလုပ်... ကမ္ဘာ့ သက်တမ်း အရင့်ဆုံးလူသားရန်သူ... ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါကို ကုသခြင်း... နှပ်လို့ ဖီးလ် မလာတဲ့ အ ကာလ အခါတွေမှာ... ရှင်ကွဲ သင်္ကြန်(ကဗျာ) ... ဘတ်ငွေ စစ်စစ် ... အညတရတို့ရဲ့ အလွမ်းဇာတ်... မျှော်လင့်ခြင်း ကောင်းကင်... အဆိပ်သင့်ပန်း... တုနှိုင်းမမီတဲ့ ကရုဏာရှင်.... ကင်ဆာပျောက်ဆေးရှိသည်။ သို့သော်... ဆီးကြိတ်ကင်ဆာဖြစ်ရင် ဗီတာမင်-ဒီစား... အသည်းရောင် ဘီပိုးသမား ခွဲခြားဆက်ဆံခံရ... ဆေးရုံဘေးက ကလေး အရိုးတွေ... ပရဟိတ ဦးနှောက်... မတ်မတ် ထိုင်ရင်ခါးနာမယ်... ဂူဂယ်လ်နဲ့ ဆေးကုခြင်း ... ပဲစားပြီးလေမလည်စေဖို့... ငှက်ဖျားနဲ့ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ... အယ်လ်ဇိုင်းမား ကာကွယ်ဆေးအလားအလာ... သားအိမ်နှစ်ခုနဲ့ မိန်းကလေး သုံးမြွှာပူးမွေး... ဗီတာမင် အားဆေးစားရင် အသက်တိုမည်... အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီ အားကစားမှ ပျံ့နိုင်သည်... ကြက်သွန်ဖြူ စားလို့ အဆီမကျ...
Title: "Nightingale Journal", January 2007/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၀၇
Description/subject: နိုင်ငံတကာ ကလေးများနေ့... လူသားတို့ ၏ လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေသည့် ကပ်ဆိုးများကို ပူးပေါင်း ကျော်လွှားရေး... မယ်တော်ဆေးခန်းရောက် ကျန်းမာရေး ဒုက္ခသည်များ၏ ရင်ဖွင့်သံ... တရုတ်အပ်စိုက်ပညာနှင့် တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးပညာ မိတ်ဆက်ဟောပြောပွဲနှင့် ရက်တို သင်တန်း မယ်တော် ဆေးခန်းတွင် ပြုလုပ်... နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး နေ့ အခမ်းအနား မယ်တော် ဆေးခန်းတွင် ကျင်းပ... အိမ် ငတ်သူ (ကဗျာ) ... မျက်စိဝေဒနာရှင်များ အတွက် ကုသိုလ်ဖြစ်ခွဲစိတ် ကုသသူ မယ်တော်ဆေးခန်းတွင် ပြုလုပ်... မညှိုးပန်း၊ ဖန်မီးအိမ်(ကဗျာ) ... တုနှိုင်းမမီတဲ့ ကရုဏာရှင်... အမျိုးသမီးကွန်ဒုံးသင်တန်း ဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်သူ ဆရာမ နော်ဒါးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း... လူငယ်+ ပြဿနာ = အဖြေ... စုပေါင်းတိုက်ဖျက် အေအိုင်ဒီအက်စ်... ဒီဇင်ဘာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ည... အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ပညာရှင်များ၏ ကာကွယ်ရေး အကြံကြီးများနှင့် ခရီးလမ်းကြောင်း... အကောင်းဆုံးကျောင်းနှင့် ဆေးဝါး ကုသစောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်နေသည့် ပလောင်ဒေသ... အရက်သမားအမှားတခါ... ၀ဋ်လိုက်တတ်ပါတယ်... ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး မှောင်ခိုကုန်ကူးသူ (၃) ဦးကို ထိုင်းရဲက လက်ရဖမ်းဆီး... သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာဆေးသည် အမျိုးသားများအတွက် လည်း အကျိုးရှိနိုင်... ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါနှင့် နောက်ထပ် သေဆုံးမှုကို အင်ဒိုနီးရှား သတင်းထုတ်ပြန်... တတိယ အကြိမ်မြောက် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားဟု ဂျပန်နိုင်ငံ အတည်ပြု ပြောကြား... အပြာ ရုပ်ပုံ ကြည့်ရှုခြင်း အတွက် ဖုန်းခ ဒေါ်လာ (၄၀၀၀) တောင်းခံလွှာ ရောက်ရှိလာမှုကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေမှု ဖြစ်ပွား... အစ္စရေး တရားရေးဝန်ကြီး ဟောင်း လိင်ကိစ္စကျူးလွန်မှု အတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိ... ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ ၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ကို ဒဗလျူ အိပ်ခ်ျအို ချီးကျူး ... အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ပိုးကူးစက်မှုကို တားဆီးရန် အကျဉ်းထောင် များတွင် ကွန်ဒုံးများလိုအပ်... ကမ္ဘာ့အေအိုင် ဒီအက်စ်နေ့ အထိမ်အမှတ် အခမ်းအနား မယ်တော် ဆေးခန်းတွင် ကျင်းပ...
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/2007_jan.pdf
Date of entry/update: 13 February 2007
Title: "Nightingale Journal", November 2006/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၀၆
Description/subject: ဖင်းမ်ကျိုင် (သို့မဟုတ်) အမှောင်ကိုထွန်းညှိတဲ့ မီးအိမ်ရှင်... သုတေသန ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး... ကျန်းမာရေး အစီရင်ခံစာ အကျဉ်းချုပ်... လူထုကျန်းမာရေး စေတနာ့ဝန်ထမ်း သင်တန်းနှင့် ရှေးဦး သူနာပြု သင်တန်း ဆင်းပွဲ အခမ်းအနားပြုလုပ်... အလုပ့်ရှင်မဟုတ်သည့် သူဌေးပေးသော ဟင်းကိုစားမိပြီး ၀မ်းလျှောမှု ဖြစ်ပွား... မယ်တော် ဆေးခန်းတွင် မျက်စိခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်... ဆယ်ကျော်သက်မျိုးပွားမှု ဆိုင်ရ သင်တန်း မယ်တော်ဆေးခန်းတွင်ပြုလုပ်... အရည်အသွေး မြှင်တင်ရေး ဆိုင်ရာ သုတေသန သင်တန်း မယ်တော်ဆေးခန်းတွင် ပြုလုပ်... မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် မဲဆောက် တန်ဆောင်တိုင်... မော်လမြိုင်ဆေးရုံမှ ပေးသော ဆေးကို ထည့်ရာမှ ကလေး မျက်စိ အပြင်သို့ ထွက်လာခြင်း... သွားမထိနဲ့ ငြိသွားမယ် (ကဗျာ) ... သက်ရှည် ကျန်းမာ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်ပါ... အသည်းလေးလို့ မခေါ်တော့ဘူးမသင်းမေ... ဆေးပညာလောက၏ ယုံကြည်ချက် အကျပ်ဆိုက်မှု ... ဆင်ခြင်စေ့ချင် ထောင်ဆရာဝန်... အားသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်း... နွံနစ်တဲ့ပန်း... ချစ်တယ် ဆိုလျှင်... ဆေးသတင်း အတို အထွာ - ဆြာဂါတင်ဆက်သည်... ၀မ်းတွင်းပါ ပရဟိတစိတ်... အမျိုးသားတားနည်းသစ်... ကျန်းမာရေး လုပ်သား အမှားတထောင်... ငှက်ဖျားကုနည်းသစ်... အမျိုးသမီးတို့ အတွက် ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးလာပြီ... ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်မျှော်လင့်ချက်... မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းသုံးတဲ့အမျိုးသားများသတိထား... ပုရိသတို့ အတွက် စွမ်းအားမြှင့် ဆေး လာဦးမည်... လုံးဝနီးပါး ကုမရတဲ့ တီဘီ... အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ ကင်ဆာရောဂါများနှင့် ရေရှည်စစ်ခင်းပြီးနောက် ဂျက်ဖ်ဂက်တီကွယ်လွန်... မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေးခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို သူမ၏ ကိုယ်ရေး ဆရာဝန် တွေ့ခွင့်မရ... ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ရေနစ်သေဆုံးမှုများအတွက် အရက်ကိုအပြစ်ဖို့.... အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ/ အေအိုင်ဒီအက်စ် ပညာပေးအဖွဲ့ကို တရုတ်အာဏာပိုင်များက ပိတ်ပင်...
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/2006_nov.pdf
Title: "Nightingale Journal", September 2006/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၆
Description/subject: တွယ်ရာမဲ့များ၏ ပဲ့တင်သံ (သို့မဟုတ်) မယ်တော်ဆေးခန်းရောက် ကျန်းမာရေး ဒုက္ခသည်များ၏ ရင်တွင်း စကား... လူသားဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးနှင့် လူသားအားလုံး၏ တာဝန်... နာတာရှည်ကပ်ဆိုး( သို့မဟုတ်) မြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်း ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး စစ်တမ်း အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်... နယ်လှည့် ကျောပိုးအိတ် ကျန်းမာရေး လုပ်သားအဖွဲ့၏ နယ်စပ်ဒေသ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု သတင်း ဓါတ်ပုံများ... စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် လူထုကျန်းမာရေး စေတနာ့ ၀န်ထမ်း သင်တန်းကို မယ်တော်ဆေးခန်း တွင် ဖွင့်လှစ်... ရင်ချင်း စကား(ကဗျာ)... ကရင့်ရိုးရာ ၀ါခေါင်ချည်ဖြူဖွဲ့ မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်... ငှက်ဖျားဆေး အတုများကြောင့် အသက်အန္တရာယ် အကြီးအကျယ်ရှိနိုင်... အေအိုင်ဒီက်စ် ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး သည် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းပြီး လူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိမှသာ အောင်မြင်နိုင်မည်... အေအိုင်ဒီအက်စ်သတိ လိင်ဆက်ဆံသည့်အခါတိုင်း ကွန်ဒုံးသုံးပါ... အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါ ခံစားနေရသူများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကို တိုက်ဖျက်ရန် အချိန်တန်ပြီဟု ကမ္ဘာ့ အသိုင်း အ၀ိုင်းအားတိုက်တွန်း.... မူးယစ်ဆေးစွဲလန်းမှုအား ကိုယ်တိုင်ကုသခြင်း... တိုင်းရင်းသား စာပေများဖြင့် ကမ္ဘာ့မြေပုံ... ချစ်တော့ချစ် ဆစ်ဖလစ် မဖြစ်စေနဲ့... မရဏတံခါးက ကြိုမဲ့သူ... လွင့်မျောနေသော တိမ်စများ... သောင်ရင်းနှလုံးသားပေါ်က မျက်ရည်စက်များ... မက်စိအဆုံး နားအရှုံး... ကမ္ဘောဒီးယား အယူသည်းမှုနှင့် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး... အချစ်ကြောင့်... ညဉ့်ငှက်မလေးများရဲ့ ဆည်းဆာလွန်ချိန်... လူတွင် ဖြစ်ပွားသည့် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးကို ဗီယက်နမ်နှင့် လာအိုနိုင်ငံ တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည်... အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာရှင်များအတွက် ဘီလ်ဂိတ် ၏ အလှူဒါန... အေအိုင်ဒီအက်စ် တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကိုရန်ပုံငွေ ပေးမည်ဟု သြစတေးလျ ကတိပြု... လူတွင်ဖြစ်ပွားသည့် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်စဉ်ကို နောက်ထပ်တွေ့ရှိကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား အတည်ပြုပြောကြား... ရဲအရာရှိတွေမှာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးတွေ့ရှိ... တရုတ်ပြည်တွင် ကလေးများအတွက် အေအိုင်ဒီအက်စ် ဆေးဝါးများ ဆိုးဆိုး ၀ါးဝါး လိုအပ်နေ... ၂၀၁၀ ခုနှစ် တွင် အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါကြောင့် ကလေး ၂၅ သန်းခန့် မိဘမဲ့ ဖြစ်ဖွယ်ရှိ... ယောက်ျားများတွင် လိင်တံထိပ်အရေပြား ဖြတ်ခြင်းသည် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ကူးစက်မှု တားဆီးရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်... ငွေကြေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးအတွက် ဆယ်ကျော်သက်များ လိင်ကို ပေးဆပ်နေကြရ...
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/2006_sep.pdf
Title: "Nightingale Journal", July 2006/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- ဇူလိုင်၊ ၂၀၀၆
Description/subject: စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့ သားကောင်များ(သို့မဟုတ်) တ၀မ်းတခါးအတွက် အမှိုက်ပုံကို မှီခိုနေကြရတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်သားများ... သင်တန်းပို့ချမှု စွမ်းရည် ထက်မြက်ရေး သင်တန်း မယ်ဟောင်ဆောင်တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြား... ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေး တိုးမြင့်လာစေရန် ၀ိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်... ထိုင်းတိုက်ကြတွေ ပတ်စ်ပို့လုပ်ရပြီ... ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများကျန်းမာရေး ညီလာခံ ဘန်ကောက်တွင် ကျင်းပ ... ဝေဒနာမတူတဲ့ ကလေးလူနာနှစ်ဦး... သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်သိမ်းရေး နေ့ အထိမ်းအမှတ် လှုပ်ရှားမှုများ မယ်တော်ဆေးခန်း၌ ကျင်းပ... ကမ္ဘာ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး နေ့ အခမ်းအနား မယ်တော်ဆေးခန်း၌ ကျင်းပ... အေအိုင်ဒီက်စ် သတိ လိင်ဆက်ဆံ သည့်အခါတိုင်း ကွန်ဒုံးသုံးပါ... အနှိုင်းမဲ့ အနတ္တ... ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဟာ လူ့ အခွင့်အရေး တဲ့ (၃) ... မယ်တော်ဆေးခန်းရောက်ကျန်းမာရေ ဒုက္ခသည်များ၏ ရင်ဖွင့်သံ... အဖော်... အပျော်တချက် သတိချပ်... မင်းဘယ်ပြေးမလဲ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး... ဆင်းရဲလို့ မကျန်းမာ၊ မကျန်းမာလို့ ဆင်းရဲ... မူးယစ်ဆေး အန္တရာယ် ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်... စကားဝိုင်းတွင် တခဏ... တချက်လောက်တော့် ငဲ့ကြည့်သင့်ပါတယ်... မြေဇာပင်လေးရဲ့ မနက်ဖြန် အတွက် လက်ဆောင်... ချစ်ခြင်း တရားကြောင့် လှနေသောကမ္ဘာငယ်လေး... သဘာဝ ပိန်ဆေးသစ်... အမောဆီလင်ဆေးမတိုးတော့... တိုင်းရင်းသားစာပေများဖြင့် ကမ္ဘာ့မြေပုံ ... သွေးတိုး- နှလုံးရောဂါသမားတွေ ၀က်သား၀၀ စားနိုင်ဖို့ပြင်... နမိုးနီးယားကိုရက်လျှော့ကုနိုင်... ကလေးကာကွယ်ဆေးမွေးပြီးပြီးချင်း ထိုးနိုင်မလား... သွေးမထွက်တဲ့ ခွဲစိတ်မှု... ပဋိဇီဝ ဆေးသစ်... အမော်ဆီလင်နဲ့ သွားပြဿနာ... ပိန်စေမယ့် ဟော်မုန်းများ... ဂျင်တာမိုင်စင်ကြောင့် နားမလေးစေဖို့.... ဆေးဝန်ထမ်းတို့ရဲ့ ဆေးပေးချက် အမှားများ... ယောက်ျားတွေ အတွက် တားဆေး...
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/2006_jul.pdf
Title: "Nightingale Journal", February 2006/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- ဖေဖေါ်ဝါရီ၊ ၂၀၀၆
Description/subject: မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ အိုလော့ပမ်း ဆုချီးမြှင့်... မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ သားသမီးတွေ အတွက် ဆာသူးလေ အထက်တန်းကျောင်းသစ်ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်... နယ်လှည့်ကျောပိုးအိတ် ကျန်းမာရေး လုပ်သားအဖွဲ့ရဲ့ ဒုတိယ အကြိမ်ညီလာခံ သက်တမ်း ပထမအကြိမ် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးနဲ့ (၁၅) ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး... စိတ်ဓါတ် မြှင့် တင်မှု ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု များအချိတ်အဆက်ရှိရှိ ဆောင်ရွက်ရေး... မဲဆောက်မြို့မှာ အလုပ်သမားအာမခံကြေး ကိစ္စ ဂယက်ရိုက်...ဆေးလိပ်နဲ့ ကျန်းမာရေး သင်ဘာကိုရွေးမလဲ... ပိတောက်တွေခုးခွင်မရတဲ့ နွေဦး(ကဗျာ) ... ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်မှာ ကျင်းပတဲ့ ပညာရေး နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ... စစ်အစိုးရရဲ့ ကန့် သတ်ချုပ်ချယ်မှု တွေကို လက်မခံတဲ့ အိုင်စီအာစီ... အာဆီယံပါလီမန်မြန်မာကော့ကပ် အဖွဲ့ (AIPMC) ကရင်နီဒုက္ခသည်စခန်းကို သွားရောက်လေ့လာ... နှစ်လအတွင် ကရင်ဒုက္ခသည် (၃၇၄) ဦး ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်သို့ ရောက်ရှိလာ... အနှိုင်းမဲ့ စွတ်လွှတ်သူ.... ချမ်းသာမှ အသက်ရှည်မည်... ပျင်းရိခြင်းဟာ ဆေးလိပ်ထက် ပိုဆိုးတယ်... မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ ကျန်းမာရေး... ရာသီလာစဉ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း... မာသာ ထရီဆာ... စောင့်ကြည့်... မှားပါတယ်... ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှော ရောဂါ (သို့မဟုတ်) အထက်လှန်အောက်လျှောရောဂါ... ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းရေးလမ်းစသစ်... မိဘများကွာရှင်းခြင်းနှင့် ကလေးငယ်များ ဘ၀... မှာခဲ့ပါရစေ... တီဘီရောဂါ အမြစ်ပြတ်တိုက်ဖျက်ရေး အတွက် ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံးသူဌေးကြီ ဘီလ်ဂိတ် ဒေါ်လာသန်း (၉၀၀) လှူဒါန်း... လူထု ကျန်းမာရေး ပညာပေး ဆရာဝန့် တာဝန်... အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသက်ဆက်ရှင်နိုင်မလဲ သိနိုင်... တရုတ်နိုင်ငံရဲပ ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းအများဆုံး ထဲမှာ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါက တတိယနေရာလိုက်နေ... အိန္ဒိယနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု ကြောင့် အာရှ အိမ်နီးချင်း (၅) နိုင်ငံမှာ ကြက်ငှက်တင်သွင်းခွင့် ပိတ်ပင်... သုံးနှစ် အတွင် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ကူးစက်မှုနှုန်း ထက်ဝက်လျှော့ချနိုင်ဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံက စီစဉ်နေ... နှလုံးရောဂါသည် မိခင်လောင်းတွေ အသက်အန္တရာယ် သတိထားဖို့ လို... ကမ္ဘာကျောရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ဂျက်ကီချန်း အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာ ရှင်တွေကို အားပေးကူညီ... ကြငှက်တုပ်ကွေးကြောင့် လူဦးရေ(၁၄၂) သန်းခန့် သေဆုံးနိုင်... ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုကြောင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာတ၀န်း သေဆုံးမှု နှစ်ဆမြင့်တက်လာနိုင်...
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/2006_feb.pdf
Title: "Nightingale Journal", January 2006/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၀၆
Description/subject: တတိယ အကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးပညာရှင်များ အသင်း ညီလာခံကို ထိုင်း မြန်မာ နယ်စပ် တနေရာမှာ ကျင်းပ... ဒေါက်တာ ရှောလူး(ပထမဆရာဝန်)... ချစ်ခြင်း လွန်(ကဗျာ) ... အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကလေးများနေ့ အခမ်းအနား မဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပ... ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ကို ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပ... မြန်မာဒုက္ခသည်များအတွက် ပညာရေး အစီအစဉ်ကို ထိုင်းအစိုးရမှ ရေးဆွဲ ... မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနား ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပ.. ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာများ နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားနေ့ကျင်းပ... မြန်မာကလေးငယ်များ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရေး ယူနီဆက်တိုက်တွန်း... ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကြား ၀မ်းရောဂါ အဖြစ်များ... ကိုရီးယား လူမှုရေး အသင်းက မယ်တော် အထက်တန်းကျောင်း သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၂) သိန်း (၆) သောင်း လှူဒါန်း... မြန်မာနိုင်ငံရေး ဒုက္ခသည်သစ်များကို ထိုင်းမဟာမင်းကြီးရုံးက လက်မခံတော့ ... ရန်ကုန်တိုင်းမှာ ကလေးတွေကို ကာကွယ်ဆေးမထိုးကြဖို့ တားမြစ် ... ဆူနာမိငလျှင် ရေလှိုင်း ဒဏ်မှာ သေဆုံးခဲ့တဲ့ မြန်မာ အလောင်းများကို ထိုင်းက လွှဲပြောင်းပေး... ဆူနာမီငလျှင်ဘေးသင့်သူများအတါက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လိုအပ်နေသေးကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီ အသင်းမှ ပြောကြား... (၅၇) နှစ်မြောက်ကရင်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားများ တပ်မဟာ ဒေသ အသီးသီးမှာ ကျင်းပ... လူထု ဒေါ် အမာ (၉၀) ပြည့်မွေးနေ့ ဂါရ၀ အခမ်းအနားနဲ့ သမိုင်း အလွန် ဗွီစီဒီဖြန့် ချိပွဲကို ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ် တနေရာမှာ ကျင်းပ... အိုင်စီအာစီ ခရီးစဉ်ကို ကြံ့ဖွံ့နှောက်ယှက်တဲ့ အတွက် ဖျက်သိမ်းခဲ့ရ... ရခိုင် ဒုက္ခသည်များအရေးကို ယူအန် အိပ်ခ်ျစီအာမှ တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်မယ်... ပြောပါရစေ... ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဟာ လူ့အခွင့်အရေးတဲ့(၂) ... မာသာ ထရီဆာ... အလကားကံတရား... နယ်စပ်မျဉ်းကြောင်းပေါ်က အန္တရာယ်ကြီး... ဘ၀ရွက်ကြွေ... အပူလောင်ခြင်းကို ပြုစုဖို့ ... ကျမကိုယ်စားပြောပေးပါ... မွေးကင်းစကလေး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဆိုင်ရာ ရက်တိုသင်တန်း မယ်တော် ဆေးခန်းမှာ သင်ကြား... မွေးကင်းစ အသားဝါ ရောဂါ... ကျန်းမာရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနေရာမှာ ကျင်းပ... တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ကျန်းမာရေး လုပ်သား သမဂ္ဂကျန်မာရေး ဆိုင်ရာ နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပ... ရယ်စရာ ရုပ်ရှင်ကားကြည့်ပါက နှလုံးအားပိုကောင်းလာ... ကာမ အားတိုးဆေး သုံးစွဲသူများ မျက်လုံကွယ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများ... ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်... အက်စပရင် ဆေးပြား ဟာ လေ မဖြတ် အောင် ကာကွယ် ပေးနိုင်... ၀မ်းလျှောရောဂါ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ စမ်းသပ်ဆေး (၂) မျိုး ထိရောက်တဲ့ ရလဒ်ထါက်ပေါ်လာ... ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါ ကြောင့် ဖိတ်စင်မှု ၂၀၀၅ ခုနှစ် အတွင်းထိုင်းများ သိသာစွာကျဆင်း... ကိုယ်ဝန်ရဖို့ အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့်စားရတဲ့ စုံတွဲတွေမှာ သားယောက်ျားလေးရနိုင်ခြေ ပိုရှိ... လူမှာ ကူးစက်တဲ့ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး အန်ကာရာ သို့ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိ... အနက်ရောင်ချောကလက်စားသုံးခြင်းက နှလုံးရောဂါကို ဟန့်တားနိုင်... ကျန်းမာရေး စနစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနေရာမှာ ကျင်းပ...
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/2006_jan.pdf
Title: "Nightingale Journal", December 2005/ နိုက်တင်ဂေးလ်- ကျန်းမာရေးဂျာနယ်- ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၅
Description/subject: ကမ္ဘာ့ အေအိုင်ဒီအက်စနေ့ မဲဆောက်မှာ ကျင်းပ... လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးမဲ့ အီးယူ အဖွဲ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်များနဲ့ တွေ့ ဆုံညှိနှိုင်း... UNSUNG HERO OF COMPASSION ဆုရ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း... မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နအဖ အစိုးရကနေအိမ် အကျယ်ချုပ်သက်တမ်း (၆) လ ထပ်မံ တိုးမြှင့် ... ထိုင်းမြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး တန်ဆောင်တိုင် မီးမျှောပွဲ (လွိုင်းကထုံးပွဲ) မဲဆောက်မှာ ကျင်းပ... သတင်းစာဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာရဲ့ အသက် (၉၀) ပြည့်မွေးနေ့ အထိမ်အမှတ် အခမ်အနားများ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ... အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဝေဒနာသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများဆေးရဖို့ လမ်းစပွင့်... မြန်မာ အလုပ်သမားအတွက် လုပ်ငန်း ခွင်ထိခိုက်မှု နစ်နာကြေးပေးရန် ထိုင်းရုံးက ဆုံးဖြတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအတွက် အရေးပေါ် စောင့်ရှောက်မှု သင်တန်း မယ်တော် ဆေးခန်မှာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား... မြန်မာနိုင်ငံမှာ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေဆိုးဝါး... ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်ရဲ့ (၄၆) နှစ် မြောက် မွေးနေ့ အခမ်းအနား မယ်တော် ဆေးခန်းမှာ ကျင်းပ... အိမ်တွင် အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး သင်တန်း ဆင်းပွဲ ကျင်းပ... အိုင်အိုဒင်း အလွန်ဝေဒနာ... သန့် (၄) သန့် ... ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဟာ လူ့ အခွင့်အရေးတဲ့... မာသာ ထရီဆာ... နင်လားဟဲ့ အေအိုင်ဒီအက်စ်... လူနာကုတင်အမှတ် (၁၃) ... သွေးလွန်တုပ်ကွေး နောက်ဆက်တွဲနဲ့ သေတဲ့ကလေး... မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်းဟာ မိခင်အတွက် လည်းကောင်းကျိုးရှိနေ.... မျောလွင့်နေတဲ့ ဆန္ဒများရဲ့ ပဲတင်သံ(သို့မဟုတ်) ကြိုးမညှိရသေးတဲ့ ဘ၀များရဲ့ ဂီတသံစဉ်... ဆက်လျှောက်... ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ သားဖွားပြီးစ အမျိုးသမီးများသွေးခဲခြင်းအန္တရာယ် နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရ... ငှက်ဖျား ဆေးအတုကြောင့် ငှက်ဖျား ရောဂါ ထိန်ချုပ်မှု ကျဆင်းနိုင်... တရုတ်နိုင်ငံ ကလူကိုကူးစက်စေတဲ့ ကြက်၊ ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဆေးဝါးတမျိုးကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြား... တီဘီရောဂါရှိ/မရှိ စစ်ဆေးမှု လ့ အသက်များစွာကို ကယ်တင်နိုင်... လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဟာ ဘ၀သက်တမ်းကို (၃) နှစ်ပိုရှည်စေနိုင်... တုပ်ကွေးရောဂါကို အိမ်ထောင်ရေ အဆင်ပြေသူများပိုခံနိုင်ရည်ရှိ... ဘလိတ်ဓားမှ တဆင့်အိပ်ချပ် အိုင်ဗွီ/ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါ ပိုး ကူးစက်မှုနှုန်းနည်းပါး... မြန်မာကလေးငယ်များရဲ့ ကျန်းမာရေး အတွက် ဂျပန်အစိုးရက ဒေါ်လာ ၃၈ သိန်း လှူဒါန်း... သကြားဓါတ် ဟာ ကင်ဆာ ရောဂါကို ခုခံရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်နေ... အမေရိကန်အခြေစိုက် တိဗက် အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်တဲ့ Wisdom in Action က ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် ကို Unsung Her of Compassion ဆုချီးမြှင့်... အိပ်ခ်ျ အိုင် ဗွီ ပိုးရှိတယ် လို့ ဆေးစစ်ချက်ထွက်ထားတဲ့ ဗြိတိန်အမျိုးသားတဦး အံ့သြစရာကောင်း စွာ ရောဂါပိုး မရှိတော့ ဟု ဆို... အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဆေးရုံတက်တဲ့အမျိုးသမီး လူနာ မျက်လုံးကို ပုရွက်ဆိတ်အစားခံရ... ငှက်ဖျားရောဂါကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ မှိုဟာ လက်နက်တခုဖြစ်လာ...
Alternate URLs: http://maetaoclinic.org/wp-content/uploads/2011/10/2005_dec.pdf